25 Naqshad Oo Ay U Waxyooday Dabeecadda | Abuurista khadka tooska ah
Qof kasta oo shaki geliya in cagaar ku jiro moodada waa khaldan tahay, maxaa yeelay dhammaan nashqadaha ay ku jiraan wuxuu muujiyaa dhadhanka dabeecadda sidoo kale quruxda ayaa leh dhiirigelin aad u wanaagsan oo internetka ah.
Waxa aan maanta kaaga tagayaa waa 25 websaydh oo doortay inay u abuuraan boggooda dabeecadda sababta ugu weyn ee naqshadaynta iyo hanuunintooda, dhammaantood waa kuwo cagaaran oo tixgelinaya aragtida deegaanka.
3 Ilaali Foret ah
4 berry taami
5 Hydro Harvest Healthy
6 Duchy of Xannaanada Cornwall
7 Sewanee Xidh
8 Sariir dabiici ah
9 Asalka Duchy
11 Dib-u-warshadaynta qaab-nololeedka - Grobots
13 Suuqa Dhan Foods
16 Ku beero Ujeedo
17 Marie Veronique Noolaha
18 Alaabada Xaashida Owl
19 Dukaanka Organic
21 Matxafka Frogwatch
23 Deegaanka Eco Ltd.
24 Kaabayaasha Cagaaran Inc
25 cagaar cad
Hadafka e-One waa inuu horumariyo habab cusub oo keenaya faa'iidooyinka joogtaynta deegaanka ganacsiyada yaryar iyo kuwa dhexdhexaadka ah iyo ururada.
Iyada oo ku saleysan Waqooyiga Kaalifoorniya, EcoForms waa ganacsi qoys aasaasay oo ka koray hamiga ah in la helo baddel dheriyada caagga ah. Raadinteena beddelka ayaa noo horseeday dheriyaal adkaysi badan, haddana karti-badan, oo laga sameeyay fiilooyinka miraha la cusbooneysiin karo - maanta EcoForms ™
Ilaali Foret ah
Wax laxiriira ilaalinta qasabka ah. Waan ka xumahay ragga, faransiiskaygu ma fiicna.
Websaydh ku faafiya ereyga ku saabsan berriga táami (Synsepalum dulcificum), oo mararka qaarkood loo yaqaan miro mucjiso ah, berry mucjiso ah, berry sixir ah, asaa iyo ledidi, waa miro yar oo casaan ah kuna dhashay waddanka Galbeedka Afrika ee Ghana.
Hydro Harvest Healthy
Waxaan nahay San Luis Obispo baayacmushtariga ugu weyn ee hydroponics iyo qalabka dhirta dabiiciga ah iyo qalabka. Kaalay salaan dheh oo booqo bakhaarkayaga si fiican u buuxan!
Duchy of Xannaanada Cornwall
Anaga oo ah xanaano dhaqameed, waxaan ku faanaa kala duwanaanta iyo tayada dhirta aan soo saarno, iyo waliba saaxiibtinimada, talooyinka khibrada leh ee ay bixiyaan shaqaalaheena.
Sewanee Close waa beel beel degen oo ku saleysan dhaqan dhismo waara oo ku wareegsan 100 hektar oo ah dariiqooyin si joogto ah loo ilaaliyo iyo daqiiqado kayn ah oo laga soo galo albaabbada bogga Sewanee ee ku yaal Cumberland Plateau. Hadafka Sewanee Close waa in la isku daro naqshadeynta xaafadaha iyo dhaqanka deegaanka ee joogtada ah ee ilaalinta dabiiciga ah, abuurista bulsho firfircoon oo qancisa dadka da 'kasta leh ee wadaaga dareenka midba midka kale iyo dhulka ku xeeran.
Sariir dabiici ah
Sariirta ilmaha ee dabiiciga ah ee ka timaada Cama organic waa sariir sheeko cusub laga sameeyay alwaax adag iyo fidsan cudbi dabiici ah
Tan iyo markaas waxaa jiray isbeddel xagga badda ah oo ku yimid dabeecadaha. Laga soo bilaabo ganacsiga dabiiciga ah iyo kan cadaalada ilaa cuntada iskuulka iyo beerashada waarta, qof walba wuxuu fikrad ka haystaa cuntada. Qeyb kasta oo ka mid ah geeddi-socodka, marka laga soo bilaabo kororka, soo saarista, daabulidda, dhiirrigelinta iyo iibinta cuntada waxaa lagu baarayaa sidii hore oo kale.
Envira Media waxay u heellan tahay joogtaynta. Waxaan taageernaa oo aan maalgelinnaa moodooyinka ganacsiga ee jawiga ku habboon, iyo sidoo kale maareynta qaar ka mid ah bogagga ugu wanaagsan ee mas'uul ka ah bulshada.
Dib-u-warshadaynta qaab-nololeedka - Grobots
Booqo "Qaado Dhalo" si aad dalab u sameyso oo aad ugu guuleysato saaxiibkaa saaxiibtinimada bey'adeed. Dakhliga ka soo gala xaraash kasta oo GroBot ah wuxuu si toos ah ugu socdaa sababaha keena. Naga caawi inaan qeybteenna ka qaadno joojinta gaajada iyo saboolnimada adduunka oo dhan - ha la bilaabo dalabku.
Ecoki.com waa beel cusub, beel-nololeed cusub oo ka buuxa xamaasad dhammaan waxyaabaha la xiriira bey'ada. At ecoki.com, waxaan ku qanacsanahay wax walboo cagaaran - hadey ahaato tii ugu dambeysay ee cilmi baarista cilmiga sayniska, casriga casriga cusub, ama cusbooneysiinta cuntooyinka dabiiciga ah. Iyadoo aan loo eegin danahaaga (yadaada), ecoki.com waxay ku dadaaleysaa inay ku siiso warar casri ah, tilmaamo cagaaran oo weyn, ama xitaa cunto karinta.
Suuqa Dhan Foods
Yaan nahay Hagaag, waxaan raadineynaa cunnooyinka ugufiican ee dabiiciga ah iyo kuwa dabiiciga ah ee la heli karo, waxaan ilaalinaa heerarka tayada ugu adag ee warshadaha, waxaanan leenahay balanqaad aan ruxmi karin oo ku aaddan beeraha waara.
Falsafadeena waa inaan taageerno dhaqaalaha maxalliga ah, ka fogaanno waxyeello kasta oo waxyeello u geysta deegaanka dabiiciga ah ugana qeybgalno ilaalinta kaymaha guud ahaan iyo gaar ahaan shimbiraha. Boqolley ka mid ah faa'iidadayada ka soo baxday socdaalkeenna ayaa loo isticmaali doonaa mashruuca dhirta nabadda ee innaga gaarka ah.
WWF waxay abuurtaa xalal xalin doona caqabadaha deegaanka ee BIG. Waxaan dooneynaa dadka iyo dabeecadda inay isla barwaaqoobaan.
Ku beero Ujeedo
Dhirta Ujeedada leh waxay ka caawisaa dadka saboolka ah inay ku soo celiyaan wax soo saarkii dhulkooda si ay u abuuraan fursado dhaqaale oo ka baxsan soo celinta deegaanka. Laga soo bilaabo 1984 waxaan caawinay in ka badan 100,000 oo qof oo ku nool qaar ka mid ah 230 tuulo inay ka baxaan saboolnimada iyada oo loo marayo qaabkeena guud ee horumarka waara.
Marie Veronique Noolaha
Joogtaynta meeraha. Malaha wax lala yaabo maahan in shirkaddeenna oo dhan ay u heellan tahay sii jiritaanka. Meel kasta oo suurtagal ah waxaan u adeegsannaa alaab ganacsi oo dabiici ah, dabiici ah iyo caddaalad ah, oo lagu soo xiray 100% alaab dib loo warshadeyn karo.
Alaabada Xaashida Owl
Iyada oo u hamuun qabta farsamada gacanta, faahfaahinta & bay'adda, Alan Henderson iyo Jennifer Talham waxay u baxeen addin si ay u bilaabaan Night Owl Paper Goods, shirkad taagan oo loo sameeyay abuurista kaararka waraaqaha gacanta lagu sameeyo iyo ilaahyada alwaaxda dabiiciga ah.
Waxaan nahay Irland-kii ugu horreeyay ee 100% Dukaan Gaarka ah ee Dabiiciga ah
Ma fahmi karo… laakiin waan hubaa in tani ay la xiriirto dabeecadda.
Goobta waxaa loogu talagalay inay kaa siiso macluumaad ku saabsan dhammaan dhinacyada raha Western Australia.
SprintBio waxaa sameeyay Scott Quinton oo ujeedadiisu tahay kobcinta, iibinta iyo ka caawinta rakibida nidaamyada kululaynta tamarta la cusboonaysiin karo. Waxaan halkaan u nimid inaan kaa caawino inaad sameyso badalka oo aad xanuunka ka qaado.
Deegaanka Eco Ltd.
Waxaan nahay shirkad la aqoonsan yahay oo ah 'Microgeneration Certified Scheme' (MCS) oo abaalmarin ku heshay UK. Waxaan naqshadeyneynaa, rakibnay oo aan u xilsaaraynaa xalka tamarta la xallinayo iyo xalinta ilaalinta tamarta.
Kaabayaasha Cagaaran Inc
Kaabayaasha Cagaaran ee Inc. waa urur cusub oo aan macaash doon ahayn oo loo aasaasay inuu cilmi baaris ku sameeyo ilo tamarta la cusbooneysiin karo oo waari kara jawi ahaana leh.
Plain Green waa shir iyo suuq loogu talagalay naqshadeynta cagaaran, ganacsiga iyo fikradaha. Waxaan horumarinaynaa waaritaanka woqooyiga woqooyi.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » 25 Naqshadood Oo Ku Waxyooday Dabeecadda
Dhammaantood si aad u wanaagsan ayaa loo qaabeeyey, in kastoo sida kan ka soo jeeda Grobots midna uusan jirin!